ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့, ကယ်လ်ဆီယမ် silicates ဘုတ်အဖွဲ့, ဗာ Mat - Fet
ရောင်စုံဖျ Diatomaceous ကမ္ဘာမြေဗာ Mat ဆန့်ကျင် ...
အီး / SGS လက်မှတ်ဟော့ရောင်းချသဘာဝမဟုတ်သောစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Di ...
diatomaceous မွကွေီးပျေါမှာရေချိုးဖျာအလွန်အမင်းစုပ်တစ်ဦး ...
အရောင် Diatomite ဗာ Mat ဆန့်ကျင်ရေ Abso ဖြတ်ပိုင်း ...
Fireproof Incombustible ပြင်ပဘုတ်အဖွဲ့ကို C Cement ...
အရောင် Fiber ဘိလပ်မြေဝတ် Panel များ, Fireproo ...
အစာရှောင်ခြင်းခြောက်သွေ့မြေဆီလွှာ Diatomite ဗာ Mat ရေချိုးခန်း Ma ...
စင်ကြယ်သောသဘာဝ Comfortable Diatomite ဗာ Mat 9mm ...
9mm Diatomaceous မွကွေီးပျေါမှာအစာရှောင်ခြင်းအခြောက်ခံရေချိုးဖျာစူပါစုပ်အင်အားသုံး diatomite ရေချိုးဖျာသည် non-စလစ်ရေချိုးဖျာပင်မ Features: Diatomaceous မွကွေီးပျေါမှာရေချိုးဖျာသေးငယ်သောအပေါက်များနှင့်ကျမ်းပိုဒ်, ကောင်းသောစုပ်ယူနိုင်စွမ်း, deodorization, မှိုများနှင့်သွင်းကာကွယ်ပေးသည်, Anti-ပွတ်တိုက်မှု, အနာအထောက်အထားပြည့်ဝ၏ အပူ resistance.So, ဒီမှာက၎င်း၏အားသာချက်များကိုသာမန်ရေချိုးဖျာ, * Excellent ကစုပ်, ဒါကြောင့် * မှိုနှင့်သွင်းတားဆီးနိုင်အလျင်အမြန်ခန်းခြောက် * deodorization * အဘယ်သူမျှမလိုအပ်လက်ဆေးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်များမှာလွယ်ကူသည် * မဟုတ်သောစလစ် * ...
Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd မှရှန်ဟိုင်း, Ningbo port မှ 50km ၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိ Ningbo စီးတီးအတွက် 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့4Automation ထုတ်လုပ်မှု lines.Our စက်ရုံအားဖြင့်တရုတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်း, ကယ်လစီယမ် silciate ဘုတ်အဖွဲ့ 20,000.000 စတုရန်းမီတာ၏နှစ်ပတ်လည်စွမ်းရည်နှင့်အတူ 600,000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်းဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့နည်းပညာအကြောင်းအရာရှိသည်နှင့်ပြည်နယ်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ novelty.The ထုတ်ကုန် Intertek, SGS, TUV, PSV တို့ကစမ်းသပ်ပါတယ်အဖြစ်, အသိအမှတ်ပြုကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းက ISO 9001 ကအတည်ပြုခဲ့သည်: 2008 နဲ့ ISO14001: 2001, အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့နေသည် , အရှေ့အလယ်ပိုင်း, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, ဒါကြောင့်အပေါ်ဥရောပ, တောင်အာရှနှင့်။ အဆိုပါအရေအတွက်ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုထုတ်လုပ်မှု၏ 60% ယူတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ ရိုးသားစွာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သူငယ်ချင်းများပိုမိုကြိုဆိုပါ၏!
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာရူပါရုံကိုအတူထူးခြားတဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဒီဇိုင်နာအသင်းရှိသည်, နှင့်ကွဲပြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဒီဇိုင်းစတိုင်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးအားစနစ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, မှိုဖွံ့ဖြိုးရေး, ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကနေဆက်လက်တက်ရဖို့သေချာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မြင့်မားတဲ့အလိုအလျောက်အဆင့်နှင့်အများအပြားကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ members.We နှင့်အတူ4ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့သောပြည်တွင်းမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ရှိသည်ဟု mat.We fireproof, အလှဆင်, ခရမ်းလွန် coated, အလင်းဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့နှင့် diatomite ရေချိုးအဖြစ်ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြုများ ပြည်တွင်းပြည်ပစျေးကွက်။
Co. , Ltd မှ ", အရည်အသွေးဦးဆောင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်း" ၏အယူအဆနှင့်အတူ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူဝယ်လိုအားကျေနပ်အောင်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးရီးထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းဖို့ကိုသန့်ရှင်း။ နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူလုပ်ငန်း Win-Win ခွအေနကေို created နှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောင်မြင်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တွင်, အသုံးပြုသူထက်သာလွန်အရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုပျော်ရွှင် fun.With ပေးနိုငျသောထုတျကုနျဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ် FET အာရုံ, FET အမြဲတမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်၌ဦးဆောင်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Ningbo Fet အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ & Technology မှ Co. , Ltd မှ ", အရည်အသွေးဦးဆောင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်း" ၏အယူအဆနှင့်အတူ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူဝယ်လိုအားကျေနပ်အောင်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးရီးထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းဖို့သန့်ရှင်းလျက်, ထူးခြားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး shaped ကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်း created ဖောက်သည်များနှင့်အတူအခွအေနေ-win win နှင့်အတိတ်ကာလဆယ်နှစ် development.In ပျော်ရွှင်ပျော်စရာအသုံးပြုသူပေးနိုငျသောထုတျကုနျဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ် FET အာရုံဟာရေရှည်တည်တံ့အောင်မြင်။ တစ်ခုတည်းထုတ်ကုန် မှစ. မျိုးစုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း development.With သာလွန်အရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုရန်, ကျနော်တို့အမြဲတမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လယ်ပြင်၌ဦးဆောင်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
သင်သည်ဤအရပ်၌အမေရိကန် CONTACT နိုင်သလား
NOW က INQUITY
ပြင်ပက Wall အရောင်အသွေးစုံသော Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall သည် Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ , ပြင်ပက Wall Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Fiber ဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့ ,